ရန်ကုန် ၊ မိတ္ထီလာ လေတပ် နှင့် စစ်တွေ ရေတပ် မောင်တော သို့ထွက်ခွာ (LIVE) | Freedom News Group
by FNG on June 9, 2012	မောင်တော မြို့ နယ် တွင်း ရှိ လက်နက် ကိုင် အကြမ်းဖက် ဘင်္ဂလီ ရိုဟင်ဂျာများ အား ရှင်းလင်းရန်
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Like this:Like Loading...	From: သတင်း, ပြည်တွင်းသတင်း	← ရိုဟင်ဂျာ ဘင်္ဂလီ တွေ အကြမ်းဖက် မှုကြောင့် သေဆုံး မှု နှင့် ပျက်စီးမှု များပြား
စစ်တွေ မှာ GTC ကျောင်းသား တစ်ဦး အသတ်ခံရ →
saw aung #
September 10, 2012	honda #
June 30, 2012	Htoo Myat Aung #
မြန်မာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမြေမှာကြီး၊ ဒီရေကိုသောက်ရင်ဒီမြေရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုတော့သိတတ်ရမယ်လေ…ဒါမှလည်းလူပီသမှာပေါ့…အဲဒီဘင်္ဂ လားခွေးကုလားတွေဘာလို့မြန်မာပြည်ကိုကျူးကျော်ချင်နေလဲသိသလားခင်ဗျာ…၊ သူတို့ရထားတဲ့တိုင်းပြည်က ရေမြုပ်ပြီး မုန်တိုင်းတိုက်နေလို့ပေါ့…ရေခဲတွေအရည်ပျော်လို့ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်ရင်အဲဒီလူရိုင်းတွေတိုင်း ပြည်ပျက်ပါစေဗျာ
June 27, 2012	ုminthatko8 #
ဒီအကောင်တွေမုန်းတာတော့မှန်ပါတယ် ဒါပေမဲ့အစိုးရကလက်ခံထားတာကခက်တယ်လေ အစိုးရကလက်ခံထားတာကိုကန်ကွက်ရမယ် အင်တာနက်ပေါ်မှာလဲ သူတို့ကိုအလိုမရှိကြောင်းမြန်မာလူမျိုးတိုင်းကန်ကွက်သင့်တယ်လိုထင်တယ် မြန်မာပြည်ကနေမင်းတို့ကုလားတွေကိုအလိုမရှိပါ
June 13, 2012	dar #
June 12, 2012	saw soung #
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး စဉ်းစားချင့်ချိန်ပြီး ……အကောင်းဆုံးကိ်ုလုပ်နိုင်ကြပါစေ…ဒါပေမဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကို ဖြစိမလာစေချင်ပါဘူး…..တစ်ခါတစ်လေမှာ (တစ်ယောက်တွက် အများ၊ အများတွက်တစ်ယောက်ဆိုတာ) ရှိကြစမြဲပါ…….အသိတရား၊ သတိတရားလေးတွေလုပ်စေချင်ပါတယ်…..
June 12, 2012	thura #
June 12, 2012	mg zaw #
လောလောဆယ်အားလုံးလုပ်နိုင်တာ ကုလားရောင်းတာမှန်သမျှမ၀ယ်ကြနဲ့။ဒါန်ပေါက်ကျွေးပြီးအလှူလုပ်သူတွေ မြန်မာချက်တဲ့ဒါန်ပေါက်ဆိုင်လဲရှိတာဘဲ။ကုလားကို အသိစိတ်နဲ့ဆန့်ကျင်ရမယ်။ မြန်မာထဲက ကုလားကိုယူတဲ့မ်ိန်းမတွေ ရပ်ရွာက နှင်ပစ်ကြ။ကုလားသွေးကိုငါတို့မလို
June 11, 2012	yell may #
အရိုင်းအစိုင်းကောင်တွေကို မြန်မာနိုင်ငံကဖယ်ရှားပစ်ပေးရင် အကောင်းဆုံးပဲ လက်ခံထားပြီးနေရင် မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံး လူမျိုးတုံးကုန်လိမ့်မယ်
June 11, 2012	minn #
အားလုံး ကို သတ် ……!!!!! ( ရို ဟင် ဂျာ ) တွေကိုပြောတာ နော် ။။။
June 11, 2012	yan naing kyaw #
တို့ မြန်မာ တိုင်းရင်းသား ညီနောင်ဘွားများသွေစည်းညီညွတ်ကြပါ။ ခွင့်လွတ်ကြင်နာခြင်းစိတ်ဓာတ်ဖြင့် ခိုင်မြဲစွာလက်တွဲကြပါစို့ ။တို့ များစဉ်ဆက် စောင့်ရှောက်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ရတနာမြေကို တိုင်းတပါးသားတွေက ဘာသာရေးနည်း၊ လူမျိုးရေးနည်း၊ရန်တိုက်သွေခွဲနည်း။ နည်းပေါင်းစုံသုံး သိမ်းပိုက်လိုကြတယ်။ တို့ ပါတ်လည်မှာရန်သူချည်းဘဲ။မြင်ကြရမယ်။စည်းလုံးခြင်းသည်အင်အား။ ကောင်းသောခေါင်းဆောင်မှု ပေးသောသူကို နောက်လိုက်ကောင်းပီသစွာ နိုင်ငံကောင်းကျိုးရှေးရှုပြီး အားပေးကူညီ ထောက်ခံကြပါစို့ 
June 11, 2012	honest #
June 10, 2012	tayar #
June 10, 2012	myo chit #
ဒို.တိုင်းပြည်မှာ၇ှိတဲ. တိုင်း၇င်းသားလူမျိုးဘယ်သူ.ကိုမှအထိမခံနိုင်ဘူး ………….
ဒါဟာ ငါ.၇ဲ.၇ပ်တည်ချက်ဘဲ ငါ.တိုင်းပြည်မှာ၇ှိတဲ. …….ငါ.လူမျိုးတွေကို ထိပါတာ
တိုင်းပြည်က လူမျိုးတွေအကြောင်း မသိဘူးလား……………စစ်တပ်က တိုက်ထုပ်ပေးမယ်လို.
June 10, 2012	ko priotic #
အဓိကပြသာနာ အ၇င်းက ခင်းဗျားတို့စစ်တပ် ပဲ
ဘုန်းကြိးကိုသတ်တယ် တိုင်းပြည်ကိုစော်ကားလာတာကျတော့ ခင်းဗျားတို့ပစ်မိန့် ကို ဘယ်ကို တောင်းတာလဲ
on the spot ပစ်လိုက်ပါလား
ကျွန်တော်တို့ဘုန်းတော်ကြိးတွေ ကျောင်းသားတွေကိုသတ်တုန်းက မနှောင်းနေးသလို
တကယ် တိုင်း၇င်သားတွေကို စော်ကားလာတော့အ၇မ်းနှောင့် နေးတာကိုသိ၇တာ
ပြည်သုကို စောင့်ေ၇ှာက်တယ်ဆို တဲ့ စောင့်ပုဒ်ကိုပြောင်းလိုက်ပါလား
June 10, 2012	tt #
သားရေပေါ်အိပ် သားရေနားစား ကုလားနဲ့ ငါး အရုပ်ရေးရမယ်တဲ့ တဘောင်ရှိတယ်။ ကျေးဇူးကန်း ကုလားတွေ မျိုးပြုတ်အောင် အကုန်သတ်ပစ်။
June 10, 2012	ဝင်းသော်အောင် #
မြန်မာ့တပ်မတော်ကို လုံးဝထောက်ခံပါတယ်.။ တိုင်းရင်းသားများရဲ့ ကိုယ်စား ကျေူးဇူးတင်ကြောင်းလည်း ပြောပါရစေ။။။။။။
June 10, 2012	pheasant #
burmese killer ဆိုတဲ့ကောင် မင်းက မြန်မာတွေကို အကုန်သတ်မယ် ပြောရအောင် ဘယ် ပထွေးခွေးဝဲစားအားကိုးပြီး ပြောတာလဲ မင်းတို့လိုကောင်တွေကို မြန်မာနိုင်ငံထဲက နေ ခွေးနဲ့ရူးတိုက်ရုံနဲ့တင် မင်းတို့ ဘင်ဂလီကုလားမျိုးကို ဖြုတ်လို့ရတယ် ကွ၊ ခွေး မသား မင်းကို သတ်ပြီး ခွေးကျွေးပစ်မယ်
June 10, 2012	yenaung #
ဒီလိုငါတို့့မြန်မာလူမျိုးနွယ်တွေအရေးကြီးရင်သွေးစည်းတယ်ဆိုတာမင်းတို့ ကိုမေကိုပြန်လိုးတဲ့ ငါလိုမသားတွေမသိဘူးလားဒဂုံကျောင်းသားတွေနဲ့ အတူငါတို့ လူငယ်တွေလဲစစ်တပ်ထဲဝင်ဖို့ ဝင်မလေးဘူးအရေးကြီးရင်ဆက်သွယ်လိုက်ပါ အီးလ်မေးလ်အကောက် yenaung6124@gmail.com
June 9, 2012	hero #
June 9, 2012	zawmyotun #
June 9, 2012	Sithu Tuntunsoe #
ဒီနေ့ ရခိုင်ဖြစ်နေတဲ့ ရိုဟိန်ဂျာ ပြဿနာဟာ ငါတို့တိုင်ရင်းသားတွေနန့် မဆိုင်ဘူးဆိုရင် အားလုံးမှားကုန်မယ် ဒါကြောင်းမိုး အကုန်လုံးမှာ တာဝန်ရှိတယ်နော် ပေါမဆနဲ့ သတိထာရမယ်။
June 9, 2012	မိုက် ကယ်လ် #
စစ် သား များ ခင် များ …ဒီ ရို ဟင် ဂျာ အရေး ခင်း ဟာ.. အသင် တို့ အတွက် အခွင့် ရေးကောင်းဖြစ် ပါ တယ်။ တိုင်း ပြည် ကို ကာကွယ် တဲ့ ဂုဏ် ကို ပြန် လည် ရ ရှိ ရန် နဲ့ပြည် သူ များ က စစ် သား များ ကို ပြန် လည် ယုံ ကြည် လာ စေ ရန် အ တွက် အခွင့် ရေး ဖြစ် ပါ တယ်။ ထို့ ကြောင့် ရခိုင် ပြည် နယ် မှာ ထောက် ခံ အား ကို မှု ရအောင် ကြိုး စား ရမည့်အခွင့် ကောင်း ဖြစ် ပါတယ်။ စစ် သား ဆို တာ ပြည် ထောင်စု နှင့် ပြည် ထောင် စု မြန် မာ နိုင်ှုငံသား များ အပေါ် ကျော သား ရင် သား မခွဲ ခြား ဘဲ ကာ ကွယ် ပေး ကြောင်း သက် သေ ထူ ရမည့် အရေး ပါ…။ ကြိုး စားအောင် မြင် နိုင် ကြ ပါစေ ဟု ဆု မွန် ကောင်း တောင်းလျှက် .
June 9, 2012	aungnaung #
ပြည်သူချစ်တဲ့ တပ်မတော်ဆိုတာ ဒီလိုမျိုး ကိုယ့်တိုင်းရင်းသား ၊ ကိုယ့်လူမျိုးတွေကို လူမျိုးခြား ၊ ဘာသာခြားတွေ စော်ကားနေတဲ့အချိန်မှာ အသက်သွေးချွေးပေးဆပ်ပြီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှ ပြည်သူချစ်တဲ့တပ်မတော်ပေါ့အ
June 9, 2012	Ji Ki #
စစ်ဆိုရင် ရေတောင်စစ်မသောက်ဘူးလို့ အမြဲပြောခဲ့တာ ကျွန်တော်ပါ.. ဒီ$ကုလားတွေကို အမြစ်ပါမကျန်အောင် တိုက်ထုတ်ဖို့ စစ်အင်အားလူလိုရင် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဂျွန်းထိုးပြီး စစ်ထဲဝင်လိုက်မယ်… ဒင်းတို့ကို သတ်ချင်တာ လက်ယားနေတာကြာပီ
June 9, 2012	phyowai #
ဘယ်က စစ်ရေယာဉ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်ကွာ တိုက်ရင်ပြီးရော…တရုတ်က ..ပြင်သစ်က ရွေးနေရမှာလာ…စောက်ရေးထဲ…
ဘယ်က စစ်ရေယာဉ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်ကွာ တစ်ရင်ပြီးရော….စောက်ရေထမှာ တစ်ရုတ်က တို့ ပြင်သစ်က တို့ ရွေးနေရဦးမှာလားးးး.
June 9, 2012	burmese killer #
who tell we are start burmese rakhine start this problem .rohinjar iss not wild people .who touch their religion rohijar not stay scilent all burmese understand,our islam is peace religion but notastupid religion who touch their religion they will not scilent the burmese rakhine kill poor islamic religious prayer that we will not scilent to stay to unkill burmese rakhine ok if u tell all our islam trasfer to another country myanmar country will destroy many twonship many village .ok
to all burmese bro u are mine so wild u all think we are not start this problem u all burmese start this problem so god will decide this problem who religion are dead .so plz dont use this word next time if u use kalar next time we are scientist unlike u,u all are likeagay ok if u use next we will kill all burmese
June 9, 2012	freedoom #
ကလားကို ကလားလိုသုံးတော့ လီးဖြစ်လား အမျိုးယုတ်တွေရဲ့ ဒါမင်းတို့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးကွ မြန်မာနိုင်ငံ မြန်မာဘဲရှိရမယ်….သတ္တိရှိရင် မင်းတို့တွေလုပ်ကြည့်လိုက်လေ ဖင်မပါ ခေါင်မပါဘဲ သေသွားရမယ်…
နားလည်ထား အယုတ်တမာ သူတောင်းစားအိမ်မရှိယာမရှိ အိမ်ရှင်ကို ပြန်ကိုက်တဲ့ ခွေးရိုဟင်ဂျာမျိုးတွေရဲ့
June 12, 2012	myo chit #
ဘင်ဂလားကဇောင်းထနေတာပါ။စစ်သွေးကြွတွေမွေးပြီးခွဲထွက်နိုင်ငံထူထောင်မယ်Buffer Zone လုပ်ဖိုကြိုးစားနေတာ။အခြေအနေပြန်ကောင်းသွားရင်ဗလီတွေကိုသေချာစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။လက်နက်တွေသိုလှောင်ထားတယ်လို့သတင်းတွေရထားတာကြာပါပြီ။ဒါပေမယ်ကက(ကြည်း)ကလက်ပိုက်ကြည့်နေတယ်။မြန်မာပြည်ထဲကိုလူမှောင်ခိုသွင်းတဲ့ ဦးကျောက်တောင်ကုမဏီကိုလဲအမှူစစ်ပြီးအရေးယူသင့်ပါတယ်
June 9, 2012	myo chit #
လွန်ခဲ့တဲ့၁၉၉၀ခုနှစ် Serbiaနှင့်kozobo ဒေသတွင် အလာတူဖြစ်ရပ်မှစတင်ကာ နောက်ဆုံး serbia သည်kozobo ဒေသကိုခွဲထွက်နိုင်ငံပေးခဲ့ရသည်။
June 9, 2012	သပြေမောင် #
မြန်မာနိုင်ငံဖွား တိုင်းရင်းသားတို့အား ကာကွယ်ပေးရန် တပ်မတော်တွင် တာဝန်အပြည့်ရှိသည်။ ပါးစပ်နှင့်ပြောနေရမည့်အချိန်မဟုတ်။ ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှု့မပြိုကွဲရေး၊ အချူပ်အခြာအာဏာတည်တံခိုင်မြဲရေးအတွက် အသက်ပေးကာကွယ်ရမည့်အချိန်ရောက်ပြီ…….. တပ်မတော်နှင့်အတူ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေ အတူရှိနေမည် ။ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအတွက် စစ်ထဲဝင်ရန် အသင့်ရှိသည်။
June 9, 2012	rakhinethar #
June 9, 2012	ဗမာကြီး #
မျုိုးချစ်စိတ် တို့ ထကြွ တော့ ဟေ့…..စော်ကားနေတဲ့ ကုလားတွေ ကို အကုန်သတ်….ဒို့ တိုင်းရင်းသား တို့ စည်းလုံးကြ…….
June 9, 2012	Truth Seeker #
ဘဂ`်ါလီ ရိုဟင်ဂျာ အကြမ်းဖက်ကုလားတွေကိုသတ်ဖို့ စစ်တပ်ကလိုအပ်လာရင် စစ်ထဲဝင်ဖို့ အသင့်ရှိတယ်။
June 9, 2012	san #
ကောင်းလိုက်တဲ့… comment တွေ …ဟုတ်တယ် အကုန်သတ်… တောင်ပန် မနေ နဲ့ အစ္စလမ် ဘာသာ တွေ နင် တို့လုပ်တော့ ကောင်းလား… ဆူးလေ ရှေ့ မှာ လာ တရား ဟော တဲ့ ပါတီ ခေါင်းဆောင် ဆိုတဲ့ ကောင်… နင်ကကော…ဘယ်လို ထပ်ပြောချင်သေးလဲ ခွေးကောင် ၇ဲ့ နင်တို့ အစ္စ လမ်တွေ သေလိုက်ကြ တပါး သူသွေးမြေ ချ လို့ ကျေနပ်နေကြလား..နင်တို့အလာရှင် မြတ် ကျမ်းစာ က အဲလို သင်ပေးထားတာ လား…သူသေ ကိုသေ ပြန်ချ လို့ ..ခွေးတွေ ငါ တို့တိုင်းပြည်က နင် တို့ ကို ထမင်းကျွေးပြီး နေဖို့ ပေးထားတာ လေ ခွေးသူတောင်း စား တွေ ၇ဲ့…….အစ္စလမ်တွေ အစ္စလမ်နိုင် ငံ ကြီး က လူတွေ သွေးချောင်းစီး ပြီး ငတ်သေပါစေ…….
June 9, 2012	mg #
ရိုဟင်ဂျာ စောက်ကုလားများ အေးအေးဆေးဆေးနေပါ
မင်းတို့ နေတာ ငါတို့မြေ
မင်းတို့ စားနေတာ ငါတို့ဆန်
မင်းတို့ စော်ကားတာ ငါတို့လူ
ဒီကလူတွေမစော်ကားနဲ့ မင်းတို့ စောက်ကုလား ဖင်အသားနီလန်သွားမယ်
June 9, 2012	ဇော်ပိုင် #
ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံကုလားတွေဟာ အာဆီယံဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိပါးနေပါပြီ…။ အမေရိကန်ဘယ်လဲ..။
June 9, 2012	မိုးဝေ #
ငါကမွန်တိုင်းရင်းသားပါ။ရခိုင်ဆိုတာလည်းငါတို့ ပြည်ထောင်စုဖွားတိုင်းရင်းသားပဲ.။ငါတို့အမျိုးကိုထိတဲ့ဒီခွေးသားဝက်မြေးကြက်ယောက်ဖကောင်တွေကို … ဒီနိုင်ငံကနှင်ထုတ်ပေးပါ.။ ငါအရင်တုန်းက စစ်တပ်ကိုမုန်းခဲ့ဖူးတယ်။ အခု စစ်တပ်က အရေးကြုံတဲ့အခါမှာ ရှေ့တန်းက ထွက်ပေးပြီး ငါတို့ဘက်က ရပ်တည်ပေးတယ်။ ငါတို့ ကျေးဇူးတင်တယ်။ငါတို့လည်းစစ်တပ်ဘက်က ရပ်တည်တယ်။ ကုလားတွေကို ငါတို့ တုင်းပြည်ထဲက မောင်းထုတ်ပေးကြပါ.။
June 9, 2012	Realmyanmar #
They killed many myanmar Rakhine.Some of stupid NGO lied to the world Rakhine started .
They thought money can make everything.The real story is Bingali Rohinja started and
killed burma.Most of people in Moungtaw are Rohinjas.
June 9, 2012	kopine #
ငါတို့ဒဂုံကျောင်းသားတွေလည်းအသင့်အနေအထားရှိတယ်..။ ငါတို့ပါစစ်တပ်ထဲဝင်မယ်.။ဒင်းတို့ကို နှစ်ခုရွေးခိုင်းပါ.။ကိုယ့်နီုင်ငံကိုယ်ပြန်မလား..။မွတ်စလင်သင်္ချိုင်းချဲ့ပေးရမလား.။
June 9, 2012	jasmine #
June 9, 2012	yesheinwin #
June 9, 2012	Cloud #
COol !I envy u guys that u would join army to let them Rest In Hell ..
June 9, 2012	AKM #
မြန်မာ ပြည်သား သူရဲကောင်း ညီအကို တို့ ဒီ ဘင်ပါလီ ကလားတွေကို အမြစ်ပါမကျန် သတ်ဖြတ်ကြတော့ ညီအကို တို့
June 9, 2012	HTAY OUNG #
ဓါတ်ပုံတွင် ဖော်ပြထားသော စစ်ရေယာဉ်မှာ တရုပ်ရေတပ်မှ စစ်သင်္ဘောထင်ပါတယ်၊ တရုပ်ရေတပ်တွင် ၄င်းအမျိုးအစား စစ်သင်္ဘော ၄-၆ စင်းခန့်နိုင်ပြီး လွန်ခဲ့သောနှစ်က ရန်ကုန် သီလ၀ါဆိပ်ကမ်းတွင် (၂)စင်း လာရောက်ခဲ့ပါတယ်၊ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများဖြင့်တည်ဆောက်ထားပြီး စွမ်းရည်မြင့် စစ်သင်္ဘောအမျိုး အစားတွင်ပါဝင်ပါတယ်။ မြန်မာရေတပ်တွင် ၄င်းအမျိုးအစား စစ်သင်္ဘော မရှိဟုလည်းထင်ပါတယ်။ ဖော်ပြ ထားသော သတင်းများ မမှန်ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ကျွန်တော်တစ်ဦးတည်း၏ ထင်မြင်ချက်သာဖြစ်ပြီး မှားနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် မှားခဲ့ရင်လဲ အမှန်ပြင်ပေးနိုင်ပါရန်နှင့် နောက်ဆက်တွဲ သတင်းများကို ယုံကြည်စွာ စောင့်မျှော်လျှက်ရှိပါကြောင်း
June 9, 2012	ချိန်တန်ုပြီ #
သူ့ဘာသာ မှားတယ် မှန်တယ်က မင်းအပူလား … ကုလားသတင်းက အရေးကြီးလား … အဲဒီသင်္ဘော ဘယ်ကလဲဆိုတာက အရေးကြီးလား… အဲဒီသင်္ဘော ဘယ်ကလဲ ဆိုတာထက် ဒီသတင်းတွေ မှန်၊ မမှန်ဆိုတာက ပိုအရေးကြီးတယ်… မင်းကတော့ အရာမပါတာကို အရာပေးချင်နေတာပဲ …
June 9, 2012	PyaeSone #
June 9, 2012	Thet Minn Oo. #
မြန်မာစစ်တပ်က နိင်ငံအတွက်အခုလိုကာကွယ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲကြိုဆိုပါတယ် အခုလိုကာကွယ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါကစစ်ထဲသို့ဝင်ရန်ကျွန်တော်ဝန်မလေပါ
June 9, 2012	PT #
သရေပေါ်အိပ် သရေအနာ စား တဲ့ ခွေးကုလား တွေ
June 9, 2012	phyo #
pls,fire as soon as possible….we will come back from dubai if not enough people and stuff..
June 9, 2012	pyae sone #
June 9, 2012	Ko Rakhine #
Go Ahead! I support all take to action as 100%.
June 9, 2012	kohtet #
June 9, 2012	မင်းသခင် #
ရိုဟင်ဂျာကုလား ဘင်ဂါလီကုလား အကုန်သတ်
June 9, 2012	Ye Naing Tun #
June 9, 2012	Comments are closed.
Total Visitors:Since 16 December 2008	8,520,527 hits
Brave Woman Stood Down Armed London Attackers huff.to/1883SEN via @HuffPostWorld2hours ago
Paris Hilton's New Job Will Make You Laugh huff.to/1851yOH via @HuffPostEnt 8 hours ago
PHOTOS: Has Ellen Had Enough Of LA? huff.to/1a8odq1 via @HuffPostLA 8 hours ago
Get the daily news enter your mail Join 530 other followers